Barnaamijyada iyo Teknolojiyada - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Bogga ugu weyn/Barnaamijyada iyo Farsamada
Barnaamijyada iyo Farsamada2021-12-24T10:47:53-05:00
Qalabka abaabulka ee khadka tooska ah sida waligaa horay umaba arag - Si buuxda ayaa loo muujiyey. Muuqaal qurux badan oo farxad leh in la isticmaalo. Samee liisaska dadka u dhaqdhaqaaqa oo si fudud ula shaqee xulafadaada. Iyo ...
Isku Xirka Gargaarka
Iskuxirka Gargaarka Mutual Asheville
Iskuxirka Caawinta Wadajirka ah ee loo yaqaan 'Asheville Mutual Aid Connection' waa xog ururin bulsho iyo fariin otomaatik ah / fariin ku saleysan emayl oo isku xiri doonta dadka raadinaya ilaha & taageerada dadka soo bandhigi kara.
Gargaarka is-kaashatada ee loogu talagalay COVID-19. Covaid waxay isku xireysaa mutadawiciinta bulshada iyo kuwa u baahan taageerada
Khariidadaha Samatabbixinta ee Ilaha Dadweynaha
Deriska oo badbaadinaya deriska
C'8 - Isuduwaha
C'8 - Xiriirinta iskuduwida Kaalmada Musiibada Webapp
shabakad isgaarsiineed oo adkeysi u leh musiibada oo ay ku shaqeyso cadceedda
Rabitaanku waa goob loogu talagalay xaafadaha iyo bulshooyinka inay isku xirnaadaan, is dhawraan oo is xoogaystaan, wada jir ah. Haddii aad raadineyso kaalmo ama aad dooneysid inaad wax deymiso, dhowr tillaabood oo fudud ayaa kula xiriirin doonta dadka hareerahaaga ah!
Hel gargaar cunto, ka caawi bixinta biilasha, iyo barnaamijyo kale oo lacag la'aan ah ama la dhimay, oo ay ku jiraan barnaamijyo cusub oo loogu talagalay masiibada COVID-19
Cunto Maaha Bambooyin Khariidad
Tani waa liis kasta cutub kasta oo aan Cunno Bambooyin ahayn oo faahfaahintooda ka siiyay wadajirkayaga. Waxaan ku darnaa boggooda internetka, cinwaanada emaylka, lambarrada taleefannada iyo waqtiyada, maalmaha iyo goobaha marka ay wadaagaan cunnooyinka vegan ee bilaashka ah inta ugu badan ee suurtogalka ah. Fadlan buuxi foomka (https://foodnotbombs.net/info/mapForm) macluumaadkaaga. Ku soo biir shabakadeena caalamiga ah kuna buuxi foomkan faahfaahinta cutubkaaga. Waxaan raadineynaa inaan helno faahfaahinta ugu saxsan ee ku saabsan dhammaan kooxaha maxalliga ah.
Digniinaha Bilaashka ah
Digniinaha Freebie waxay kuu soo diri doontaa ogeysiin digniin ah mar kasta oo deriskaagu wax ku siiyo, dhagsii ogeysiiska oo haddii ay tahay wax aad u baahan tahay, kaliya la xiriir qofkaas oo qaado freebie-ga!
GasBuddy - App Raadiyaha Raadinta Gaaska Rakhiiska oo leh Faa'iidooyinka Keydinta Lacagta
Soo dejiso barnaamijka 'GasBuddy' ee bilaashka ah si aad u hesho saldhigyada gaaska ugu jaban ee kuu dhow, una keydi ilaa 40 ¢ / gal adoo u cusbooneysiinaya barnaamijka abaalmarinta shidaalka ee GasBuddy.
Gargaarka Dareenka Dahabka ah
Ku caawi deriskaaga fursadaha caawinta iswadaaga
Meel jawaab degdeg ah oo ku xidha qalbiga gacmaha (fayadhowr) gacmaha.
Waxaan ku xireynaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka adeeg iskaa wax u qabso ku adeeganaya, daryeelka carruurta iyo adeegyada caafimaadka maskaxda.
Kooxda Isu -duwidda Dabka ee Qaranka
Khariidaynta Dabka InciWeb
InciWeb waa is-dhexgal dhammaan nidaamka maareynta macluumaadka dhacdooyinka halista ah.
Kullanka Jitsi - Iskuduwaha Internetka ee Bilaashka ah
Jitsi Kulan wuxuu bixiyaa wadahadal fiidiyow oo bilaash ah, sugan, dabacsan, furfuran. Bilow isticmaalka isticmaalka Jitsi Kulan maanta. Dhis oo geyso xirmooyin vidiyoga aamin ah oo aamin ah.
saldhiga muhiimka ah
Dhamaadka dhamaadka ilaa dhamaadka dhamaadka waxyaabaha muhiimka u ah. Keybase waa farriin aamin ah iyo wadaagis fayl.
Dadka caawinaya. Shabakad taageero oo aadan waligaa ogayn inaad lahayd.
Komak.io - Ka caawi inaad ilaaliso kuwa aadka ugu baahan
Komak wuxuu isbarbar dhigayaa mutadawiciin caafimaad qaba kuwa aadka ugu halista badan ka dib COVID-19. Waxaan higsaneynaa inaan sameyno saameyn wanaagsan oo aan ka difaacno kooxaha halista ku jira.
Khariidadda Jacaylka Dharka
Khariidadda Jacaylka Dharka ayaa ka caawisa dadka u baahan caawimaad inay helaan dadaal jacayl dhar dhaqid ah oo ka dhaca magaaladooda, magaaladooda ama deriskooda. Khariidadu waxay bixisaa macluumaadka xiriirka, cinwaanka, waqtiyada, iyo taariikhaha dadaal kasta oo maxalli ah
Khariidadda Maktabadda Maktabadda Daynta Aaladda
Baadh khariidadayada si aad u ogaato agabkaaga iyo Maktabadaha amaahda - oo bilow inaad la wadaagto goob lagu kalsoon yahay!
Shabakad u furan isgaarsiinta sugan, baahinta
Qalabka Caawinta Dadka
WAANU DHAMMAAN INAAN KU SAMEEYNAAN. QIIMAYNTA BULSHADA. Adeegso madal ay ku caawiso Mutual Aid si aad u bixiso oo aad u codsatid agabyada muhiimka ah ee maalinlaha ah:
maaskaro, galoofyo, gacmo nadiifiye, buufin, tirtiraha, iyo cuntada.
Ciyaarta Dhulka Los Angeles
Khariidadda Gargaarka Mutual
Raadi Shabakadaha Gargaarka Wadajirka ah iyo mashaariicda kale ee iskaa wax u qabso ee bulshada u dhow. La xiriir kooxahan si toos ah khariidada kore si aad uga qayb gasho, u siiso ilo, ama u soo gudbiso codsiyada baahiyaha.
Beesha Caalamka, Gargaarka Maxalliga ah.
Caawinaad labada dhinac ah
MyNabes waa barnaamij bilaash u ah adiga iyo dariskaagaba. La wadaag oo ku dhaaf isweydaarsiga adeegyada iyo sheyada bulshada xaafadaada.
Shabakadda Bangiga Xafaayadda Qaranka
Khariidadda Shabakadda Bangiga Qaranka ee Xafaayadda
Shabakadda Bangiga Dhallaanka Qaranka waxay isku xirtaa oo taageertaa in ka badan 225 bangiyo xafaayad oo ku salaysan bulshada oo ururiya, kaydiya oo u qaybiya qoysaska dhibban xafaayadda lacag la'aanta ah. Shabakaddu waxay u adeegtaa ku dhawaad ​​280,000 oo carruur ah dalka oo dhan bil kasta.
Ku xir xaafadaada
Shabakada GroundBreakers Network waxay kuu diyaarisay Pando si aad u hesho macluumaad dhameystiran oo ku saabsan ilaha bulshada ee dhow. Kaliya maheli kartid inaad macluumaad kaheshid, laakiin waxaan sidoo kale ku siineynaa awood aad ku caawin karto deriskaaga adoo kudarsanaya, tafatirinaya, oo soo sheegaya warbixino.
Khariidadda Goynta Korontada
PowerOutage.US waxay uruurisaa, diiwaan gelisaa, iskuguna ururisaa xogta koronto la'aanta tooska ah ee korontada ee dhammaan Mareykanka, iyada oo ujeedadu tahay in la abuuro halka kaliya ee la isku halleyn karo oo dhameystiran ee macluumaadka korantada laga heli karo.
Dib u soo celinta.org
Ku caawi bulshadaada inay ka soo kabato aafooyinka.
Websaydh bilaash ah, oo si fudud loo isticmaalo oo loogu talagalay abaabulka gargaarka masiibada.
RX Khariidad Furan
Rx Open waxay bixisaa macluumaad ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan xarumaha caafimaadka ee aagagga ay saameeyeen musiibada. Markay khariidadu u firfircoon tahay dhacdo, isticmaaleyaashu waxay isticmaali karaan khariidada xarumaha si ay u raadiyaan xaalad xarun shaqsiyeed.
Furan Xalka Maareynta Musiibooyinka
Rasuulka Salka: Si joogta ah u hadal
Dheh "hello" waayo-aragnimada farriinta ee ka duwan. Diirad aan la filayn oo ku saabsan asturnaanta, oo ay weheliso dhammaan astaamaha aad filayso.
Tilmaamaha Waditaanka, Warbixinta Gaadiidka & Xawaaraha gawaarida ee Waze
Hel jihooyinka wadista, khariidadda taraafikada nool iyo digniinta wadooyinka. Badbaadso waqti & lacag adoo wada raacaya Waze Carpool. Soo dejiso barnaamijka taraafikada ee GPS, oo ay ku shaqeeyaan bulshada.
Khariidadda Wargelinta Hore ee Dabka
Ku soo dhowow Khariidadda #FireMappers
Zello waa barnaamijka ugu sarreeya ee lagu qiimeeyo-to-talk Walkie-talkie app, wuxuu isku xiraa 140 Milyan oo adeegsadeyaal ah adduunka, awood u siinta shaqaalaha safka hore, kooxaha, iyo bulshooyinka fariimaha degdegga ah ee codka degdegga ah.